दाँत भनेका बुढेसकालका असल साथी हुन् ! – Everest Dainik – News from Nepal
दाँत भनेका बुढेसकालका असल साथी हुन् !
डबलबहादुर धामी । भनिन्छ दाँत बलियो भयो भने आँट बलियो हुन्छ। त्यसैले पनि त देशविदेशका शोधखोजकर्ताहरुले भनेका छन् यदि दाँतलाइ समय समयमा राम्रो हेरचाह गर्यो भने र अलिकति दाँतमा खराबी आउने बित्तिकै सहि उपचार गर्ने हो भने यसको आयू १०० वर्ष भन्दा बढी हुन्छ ।
यो आलेखमा दाँत के हो ? कसरि दातमा समस्या आउछन ? दाँतलाइ सफा राख्न के गर्नुपर्छ ? कुन-कुन समयमा दाँतको ख्याल बढी गर्नु पर्छ ? कस्तो दाँत निकाल्ने ? दाँत बचाउने विभिन्न उपचार बिधि के हुन् आदि बारेमा जानकारी गराउने छु।
दाँत दुख्न थाल्छ, सुन्निन्छ, चपाउन गाह्रो हुने, पिप जम्ने र अरु ठाउँमा सर्ने आदि हुन्छ। त्यसैले समयमै दन्तरोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर उपचार गरिहाल्नु पर्छ ।
यदि दाँतको त्यो भागमा किरा लागेमा छिटो उपचार गर्नुपर्छ । पल्प हाम्रो शरीर एक नरम भाग हो । उपचार पाइन भने यसमा सजिलै ब्याक्टेरियाले हानी पुर्याउछ । दाँत दुख्न थाल्छ, सुन्निन्छ, चपाउन गाह्रो हुने, पिप जम्ने र अरु ठाउँमा सर्ने आदि हुन्छ। त्यसैले समयमै दन्तरोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर उपचार गरिहाल्नु पर्छ ।
कुनै पनि शरीरलाइ चाहिने तत्व मुखबाटै लिइरहेका हुन्छौ र बाहिरीका किटाणुहरु हाम्रो शरीरमा जान्छन र संक्रमण फैलाउछन । त्यसैले त मुखको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
स्थायी दाँत पूरै आइसकेपछि फेरी एक पटक दन्त चिकित्सक कहाँ गएर सफा गराएमा दाँत र गीजा त सफा हुन्छ नै स्वास्थ्यमासमेत यसले प्रभाव पार्छ ।
यस्तै, ३० पैतींस वर्षको उमेरमा फेरी एक पटक दाँतको अवस्था बुझ्नु पर्छ । यो समयमा दाँतको अवस्थाबारे सहि दन्त चिकित्सकको सल्लाह लिएमा तपाईको दाँत जीवनभरी बलियो नहुनेमा दुई मत छैन ।
साथै, दाँतमा कुनै खराबी देखिएमा निकाल्नुको साँटो त्यसलाई जोगाउन सकेमा बुढेसकालको गतिलो सहारा बन्न सक्छ ।
हाम्रो समाजमा चेतनाको अभाबमा दाँत दुख्यो कि निकालेर फाल्ने चलन छ । यो कार्य एकदमै खराब बानी हो । के हामी औंलाको नङमा खराबी हुँदा हातै काटेर फाल्छौ त रु हो त्यस्तै हो दाँत पनि।
हाम्रो समाजमा चेतनाको अभाबमा दाँत दुख्यो कि निकालेर फाल्ने चलन छ । यो कार्य एकदमै खराब बानी हो । के हामी औंलाको नङमा खराबी हुँदा हातै काटेर फाल्छौ त रु हो त्यस्तै हो दाँत पनि। त्यहि भएर ‘न रहेगा बास नाबजेगी बाँसुरी’ भन्ने उखानलाई अनुशरण गर्नुभयो भने बुढेस कालमा दुख्ख पाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
त्यसकारण अहिले नै दाँतको सहि उपचार र दाँत बिग्रीन दिनुभन्दा पहिले नै स्वस्थ राख्ने योजना बुन्नु पर्छ । अहिले बाँसुरी बचाएर बाँसुरीको धुनमा मिठो गित गाएर लट्ठ पर्न तिर लाग्ने समय हो ।
लेखक धामी दन्तचिकित्सक हुन् । उनी धनगढी स्थित गौरीशंकर डेन्टल क्लिनिक प्रा.लिमा कार्यरत छन् ।
ट्याग्स: Dabalbadhauar dhami, Himal Dhami, डबलबहादुर धामी
संकटमा परेका ऋषभ पन्तको कपिलदेवले गरे प्रशंसा
कोरोना आतंकः ८० को मृत्यु, २८०० मा संक्रमण, युद्दस्तरमा प्रतिरक्षा गर्दै चीन